प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा कसले मार्ला बाजी ? : RajdhaniDaily.com sharethis
प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा कसले मार्ला बाजी ?
कार्तिक २४, २०७८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका आयुक्त तथा पदाधिकारीबीच उपनिर्वाचनको विषयमा केही दिनअघि छलफल भयो । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा रिक्त प्रतिनिधि सभातर्फ ४ र प्रदेश सभातर्फ १८ गरी २२ सिटमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा दलहरूसँग सल्लाह गरेर जवाफ दिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग एक चरण छलफल गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा अब छिट्टै नै संसद्मा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सांसदको पद रिक्त भएको ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद रहने व्यवस्था छ । तर, अहिले चार सिट खाली छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित यी चारै जना सांसद एमाले प्रवेश गरेपछि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दा सांसद पद रिक्त हुन गएको हो ।
२०७४ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनतर्फको साझा उम्मेदवार बनेर चारै जना सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
रौतहट–३ बाट प्रभु साह, अर्घाखाँची–१ बाट टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–३ बाट गौरीशंकर चौधरी र कैलाली–४ बाट लेखराज भट्ट निर्वाचित भएका थिए ।
अब हुने उपनिर्वाचनबाट यी चारवटै क्षेत्रमा कुन दलका उम्मेदवार विजयी हुनेछन् ? यतिकै भन्न सक्ने अवस्था छैन । किनकि, अहिले वामगठबन्धन छैन, फुटेको छ । माओवादीबाट विजयी सांसद नै एमाले प्रवेश गरेकाले माओवादी यी चारै क्षेत्रमा कमजोर बनेको छ । गत निर्वाचनमा अत्यन्तै उत्साहजनक नतिजा ल्याएको एमाले समेत अहिले कमजोर अवस्थामा छ । एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी गठन भएकाले एमालेको साख पहिलाको जस्तो छैन ।
अर्को कुरा, वामगठबन्धन भत्केर अर्को गठबन्धन बनेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चा छन् । तर, माओवादीले जितेको यी चारै सिट माओवादीले नै पाउने कि गठबन्धनमा आबद्ध दलले भागबन्डा गर्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।
पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले आगामी आमनिर्वाचनसम्म पाँच दलीय गठबन्धन रहने भन्दै आएका छन् । तर, सत्ताको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरूले अगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नहुने प्रस्ट संकेत गरिसकेका छन् । उनीहरूले गठबन्धन आमनिर्वाचनसम्म रहन्छ भन्ने कुरा बोल्नुभन्दा कांग्रेस एक्लै चुनावमा सहभागी हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा वामगठन्धन फुटेकाले कांग्रेस बलियो अवस्थामा रहेको छ । त्यसैले कांग्रेसले निर्वाचनमा गठबन्धनको आश्यकता महसुस गरेको छैन ।
अब विश्लेषण गरौं उपनिर्वाचन हुने चार क्षेत्र’bout । रौतहट–३ बाट एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनबाट प्रभु साह २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा २७ हजार ७ सय ९९ मत ल्याएर विजयी बन्दा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुनीलकुमार यादवले १८ हजार २ सय ६ मत ल्याएका थिए । उनीहरूबीचको मतान्तर ९ हजार ५ सय ९३ थियो ।
यस्तै, तत्कालीन राजपा नेपालका ओमप्रकाश जैसवालले १४ हजार ६ सय ५८ मत ल्याएका थिए । त्यसबेला माओवादीबाट उठेर जितेका साह अहिले एमालेमा छन् । उनलाई एमालेले टिकट दिन्छ दिँदैन यकिन छैन । तैपनि उनी एमालेका बलियो दाबेदार हुन् । एमाले र माओवादीको मतबाट विजयी बनेका उनको अवस्था पहिलाको जस्तो छैन । ’cause, यहाँ एमाले कमजोर छ, उता माओवादीमाथि आफ्नो पुरानो वर्चस्व कायमै रहेको देखाउनुपर्ने चुनौती छ । उता, यो क्षेत्र नवगठित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको गृह जिल्ला पनि हो । यसले पनि यो क्षेत्रको निर्वाचनलाई चासोपूर्वक हेरिनेछ ।
मधेसको जिल्ला भएकाले यहाँ मधेसवादी शक्तिले के गर्ने भन्ने विषयले समेत महत्व राख्छ । तर, तत्कालीन निर्वाचनमा यहाँ जसपाले राजपालाई समर्थन गरेको र अहिले दुई दल छुटाछुट्टै अस्तित्वमा रहेका छन् । जसपा पाँच दलीय गठबन्धनमा छ भने राजपा छैन । तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको गृह जिल्ला भएका कारण साहलाई विजयी प्राप्त गर्न सकस छ ।
उपनिर्वाचन भएको अवस्थामा रौतहट–३ मा कांग्रेसबाट सुनिल यादव, माओवादी केन्द्रबाट विन्देश्वर यादव (ए), एकीकृत समाजवादीबाट कमल यादव, जसपाबाट विन्देश्वर यादव (बी) र लोसपाबाट ओमप्रकाश जैसवाल उम्मेदवार हुने सम्भावना छ ।
२०७४ सालमा अर्घाखाँची–१ बाट तत्कालीन वाम गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले ५० हजार ८ सय ३७ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका डा. रामबहादुर बीसीले ३२ हजार ५ सय ४४ मत ल्याएका थिए । दुई उम्मेदवारबीच १८ हजार २ सय ९३ मतान्तर थियो ।
यो क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनमा रायमाझीले फेरि उम्मेदवारी दिँदा एमालेबाट पूरै मत र आफ्नो भोट बैंकबाट केही मत पाए भने विजय नजिक पनि पुग्न सक्छन् । तर, एमाले फुटेका कारण एमालेको भोटमा कस्तो प्रभाव पर्छ र कांग्रेसले उठाउने उम्मेदवारको आधारमा रायमाझीको अवस्था थाहा हुनेछ । माओवादीलाई भने यहाँ पनि आफ्नो वर्चस्व देखाउनुपर्ने चुनौती छ ।
अर्घाखाँचीमा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र छ । यहाँ कांग्रेसबाट बीसीका साथै पुष्पा भुसाल, मुक्ति श्रेष्ठ, ढुण्डीराज शास्त्रीलगायतका नेता उम्मेदवारका आकांक्षी देखिन सक्छन् । पुष्पा अहिले कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसदसमेत हुन् । तर, उनले सांसदबाट राजीनामा दिएर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बन्न खोजेको चर्चा छ ।
यस्तै, यहाँबाट माओवादी केन्द्रका नेता लीलाराज आचार्य र एकीकृत समाजवादीबाट पीताम्बर भुसालसमेत उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा रहेका छन् ।
कैलाली–४ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट तत्कालीन माओवादी नेता लेखराज भट्टले ३१ हजार ३ सय ५९ मत ल्याएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका सुनीलकुमार भण्डारीले २० हजार ९ सय ६० र स्वतन्त्र उम्मेदवार गीता क्षत्रीले ३ हजार १ सय ७३ मत ल्याएका थिए ।
यहाँ कांग्रेसका उम्मेदवारको तुलनामा भट्टले १० हजार ३ सय ९९ मत बढी ल्याएका थिए । फेरिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कारण यो क्षेत्रका नेता भट्टले अघिल्लो चुनावमा पाएको मत बाँडिने निश्चित छ । माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका भट्टलाई कैलालीका एमालेका मतदाताले सहज रूपमा स्वीकार्छन् वा स्वीकार्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ । अर्कोतर्फ, पार्टी फुटेपछि सुदूरपश्चिममा एमालेको हालत खराब रहेको छ । भट्टलाई फेरि जित सुनिश्चित गर्न यो क्षेत्रमा चुनौती देखिन्छ ।
तर, माओवादीले पनि कांग्रेसको साथ नपाउने हो भने पुरानो जीतलाई जोगाउन मुस्किल पर्ने देखिन्छ । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल सुदूरपश्चिम इन्चार्जको जिम्मेवारी नपाएर आन्तरिक संघर्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा सुदूरमा एमाले विभाजित अवस्थामै रहनेछ । गठबन्धनको मत त त्यसै पनि एमालेको भन्दा धेरै नै हुन्छ ।
कैलाली–४ मा कांग्रेसबाट सुनील भण्डारी वा दीर्घराज भाटमध्ये एकले टिकट पाउने सम्भावना रहेको छ । भाटलाई लेखराज पराजित गर्न सक्ने उम्मेदवारको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यस्तै, एकीकृत समाजवादीले यो क्षेत्र पाएको अवस्थामा दीर्घबहादुर सोडारी उम्मेदवार बन्ने सम्भावना रहेको छ । यस क्षेत्रमा माओवादी उम्मेदवार’bout खासै चर्चा छैन ।
कैलाली–३ बाट २०७४ सालको चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनका उम्मेदवार बनेका माओवादी नेता गौरीशंकर चौधरीले २४ हजार ८ सय ७९ मत ल्याएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रामजनम चौधरीले २० हजार ४ सय ९४ मत पाएका थिए । यस्तै, राजपाले ४ हजार ४४ मत र नेकपा मालेले ३ हजार २ सय ५५ मत पाएका थिए ।
यहाँ गौरीशंकर र रामजनम चौधरीको मतान्तर ४ हजार ३ सय ८५ रहेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा बलियो रहेका एमाले र माओवादीको संयुक्त मतभन्दा ४ हजार मतले कांग्रेस पछाडि देखिएको थियो । यो क्षेत्रमा बिनागठबन्धन उम्मेदवार उठ्ने हो भने कांग्रेसले जित निकाल्ने स्पष्ट देखिन्छ । तर, माओवादीलाई यहाँ पनि पुरानो जित जोगाउनुपर्ने चुनौती छ ।
कैलाली–३ मा उपनिर्वाचनका लागि कांग्रेसबाट रामजनम चौधरी, माओवादी केन्द्रबाट वीरभान चौधरी र एकीकृत समाजवादीबाट अमर साउद उम्मेदवार हुने चर्चा छ ।
(Visited 257 times,2visits today)
भीम रावलको प्रश्न : लिपुलेकमा भारतले सडक बनाइरहँदा नेपाल सरकार किन मौन ? एमाले कैलाली अधिवेशन : ओली समूहमै ध्रुवीकरण
उच्च गतिको इन्टेरनेटको नाममा सेवाग्राही झुक्याउँदै इन्टरनेट कम्पनी
‘द भ्वाइस किड्स’को उपाधि जेनिश उप्रेतीलाई
सलमान, शाहरुख र ऋतिक एउटै फिल्ममा
कानुनले होइन व्यवहारले बलात्कार नियन्त्रण गर्छ
हटस्पट बन्दै काठमाडौं, एकै दिन थपिए १४९८ संक्रमित
टिचिङ अस्पतालमा कार्यरत ६० भन्दा धरै डाक्टर र नर्समा कोरोना संक्रमण
रेलिगेशन जोनको काडिजसँग रियल रोकियो
सुख्खा पहिरो जाँदा रसुवागढी नाका जोड्ने सडक अवरुद्ध
परियोजनामा समस्या आए तत्काल खबर गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित
यी साहसिक उद्धारक, जो पटक पटक मृत्युको मुखमा पुगेर पनि उद्धारमै रमाइरहेका छन्
युवावर्गमा लागूपदार्थको कुलत
पुष्प बरुवालको अध्यक्षतामा इनासको कार्यसमिति चयन
गण्डकीमा १८ नयाँ संक्रमित फेला, पाेखरामा १ जना थपिए
नेपालमा थप ८८४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
कोरोनाबाट थप १३ जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या १२ सय नाघ्यो
दशरथचन्द नगरपालिका र पाटन नगरपालिका सिल
संकटको मोडमा नेकपा
सप्तरीमा मुस्लिम समुदायले मनाए पैगम्बरको जन्मजयन्ती (फोटो फिचर)
छठ पर्व : जनकपुरधामका पोखरीहरुमा बिहानैदेखि भीड
स्थानीय तह निर्वाचन सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन विभाजित
भगाउन दबाब दिएपछि महिलाकाे हत्या, प्रहरीले सार्वजनिक गर्‍यो प्रेमीसहितका अभियुक्त
कांग्रेस वैशाखमै निर्वाचन गर्ने पक्षमा, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस ६ महिना धकेल्ने पक्षमा काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै
विदेशी शक्तिको चपेटामा नेपाल
यतिबेला हाम्रो देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर खालको चुनौती खडा भएको छ । साम्राज्यवादी अमेरिकाले नेपालमा विकास परियोजनामा सहयोग गर्ने परियोजना अगाडि सारेर एमसीसी सम्झौता जे जसरी
Copyright © 2021 Rajdhani News Publication Pvt. Ltd. All rights reserved.